M5c - ကောက်နုတ်တင်ပြချက် - Meizu - Meizu
ရင့်ကျက်ပြီး ဂန္ဓဝင်မြောက်သည့်စတိုင်အဖြစ်ပုံကွဲထွက်ထားလျက် M5C သည် NOBLUE စီးရီးရှိ DNA ကိုအမွေဆက်ခံပါသည်။ ရိုးရှင်းပြီး စလော့တစ်ခုသုံး၊ ကတ်နှစ်မျိုးသုံးဒီဇိုင်းသည် အချိုးအစားညီမျှသည့် အနုရသကို ပကတိဖမ်းယူနိုင်ရန် ကိုယ်ထည်အကွေးထဲမှာ အံဝင်ခွင်ကျ အတိပြီးပါသည်။ သိမ်မွေ့ညက်ညောလှသည့် ရွှေရောင်နှင့်အနက်ရောင်အပြင် M5C ကိုအခြားအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်လည်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည် - အနီဆွေးရောင်၊ ပင်လယ်ပြာရောင်၊ ပန်းနုရောင်တို့ရှိပါသည်။ သင်နှင့်လိုက်ဘက်မည့် အရောင်တစ်ခု ကျိန်းသေရှိနေပါသည်။
CNC အကွေး နှင့် ပိုလီကာဗွန်နိတ်ဖြင့်ပုံသွင်းထားသည်
အကောင်းစား ပိုလီကာဗွန်နိတ်ကို တစ်ခုလုံးအဖြစ်ပုံသွင်းထားပြီး တူညီကျစ်လစ်ပြီး တာရှည်ခံသည့် အချောထည်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရေးအတွက် နောက်ကျောဘက်အဖုံးကို 85°C ၌အစဉ်မပြတ် အပူပေးထားသလိုစပရေးဖြင့်လည်း ဆေးအုပ်ထားပါသည်။ အလွန်လှပသိမ်မွေ့လှသည့် လက်ရာနှင့်အတူ နေရာတိုင်းသော့ချက်တိုင်းမှာ တိကျမှုအလွန်မြင့်မားသည့် CNC နည်းပညာကိုသုံးထားပါသည်။ ကျစ်လစ်ကြော့မော့ပြီး စတိုင်ကျလှပသည့် M5C ကိုဖန်တီးရာတွင် ရှုပ်ထွေးသည့် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့် ဒါဇင်ပေါင်းများစွာနှင့် ဇိမ်ခံအထည်ပစ္စည်းတို့မှာ အပြစ်ကင်းသည့်ပကတိ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။
Quad-core 64-bit ပရောဆက်ဆာ၊ 2GB မြန်နှုန်းမြင့် မန်မိုရီ
1.3 GHz ထည့်သွင်းထားသည့် Quad-core 64-bit ပရောဆက်ဆာဖြင့် အားဖြည့်ထားလျက် M5C တွင် စံနှုန်းပြည့် 2GB မန်မိုရီနှင့် 16GB ဖလက်ရ်ှမန်မိုရီပါရှိုသဖြင့် မန်မိုရီမလုံလောက်မှုဖြစ်မှာကို သင်ပူစရာမလိုတော့ပေ။ လုံးဝအသစ်စက်စက် Flyme6One Mind AI အရှိန်မြှင့်တင်မှု နည်းပညာသည် ပါဝါသုံစွဲမှုအားအလိုက်သင့်လျော့ချပေးပြီး မန်မိုရီကိုပညာသားပါပါသုံးစွဲပေးသဖြင့် အတုမရှိပြိုင်ဘက်ကင်းသည့် အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းပါသည်။
အလေးချိန်အားဖြင့် 135 ဂရမ်သာရှိပြီး 8.3 မီလီမီတာသာထူသော်လည်း ဤဖုန်းတွင် စူပါအားသွင်းထားသည့် 3000 mAh ဘက်ထရီကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထို့အပြင် ခေတ်မီအဆင့်မြင့်သည့် Flyme စနစ်သည် ကိစ္စရပ်ရာပေါင်းများစွာအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖော်ဆောင်ထားသည့် စွမ်းအင်-ချွေတာရေးဖြေရှင်းမှုများကို ပေးစွမ်းထောက်ပံ့ထားသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုအများဆုံးဖြစ်သည့် အခြေအနေများကို သင် လွယ်လင့်တကူ သုံးစွဲဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
8- မီဂါပစ်ဆယ် ပင်မကင်မရာပါပြီး အရောင်နှစ်မျိုးသုံးမီးရောင်
8- မီဂါပစ်ဆယ်တပ် 4-အစိတ်အပိုင်းမှန်ဘီလူး မော်ဂျူးနှင့် ပညာရှင်သုံး F/2.0 အလင်းဝင်ပေါက်တို့ကို စွမ်းအားပြည့် အရောင်နှစ်မျိုးသုံးမီးဖြင့် အချောသတ်ထားသဖြင့် အလင်းရောင်မှိန်ဖျော့ဖျော့အောက်မှာပင်လျှင် တိကျမှန်ကန်စွာ အရောင်အသွေးခွဲပေးကာ၊ရှင်းလင်းစွာအရောင်စပ်ပေးသော ကြည့်၍ အလွန်ကောင်းသည့် ဓါတ်ပုံများကို သင်ရိုက်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ သင်ကအနုပညာကိုချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်စေ အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ယူလို၍ဖြစ်စေ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရာတွင် ပျော်စရာကောင်းပြီး ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးရန် အပိုဆောင်း စတိုင်ဖဲလ်တာများအစုံ 11 စုံဖြင့် ဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားပါသည်။
အလင်းအားကောင်းသည့် ပုံများ F/2.0 အတွက် အလင်းဝင်ပေါက်
အသားအရောင် ကောင်းမွန်လှပမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန် အချိုးအစားကျစွာဖြင့် အလှအပကိုပညာသားပါပါညှိပေးခြင်း။
တစ်သီးပုဂ္ဂလသုံးတည်းဖြတ်မှုအတွက် စတိုင်ဖဲလ်တာများအစုံ 11 စုံ
5-လက်မ HD စခရင်
ခေတ်မီဆန်းသစ်သော GFF အလွှာလွှာအပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်သည့် နည်းပညာဖြင့် အားဖြည့်ထားသော 5-လက်မ HD စခရင်ကိုထည့်သွင်းထားသည့် M5C သည် စူးရှတောက်ပမှုကို လျှော့ချပေး၍ ပုံများကို ကြည်လင်ပြီး ပြတ်သားစေပါသည်။ နေ့ညမရွေး သင့်မျက်လုံးကိုကာကွယ်ပေးရန် စခရင်အလင်းတောက်ပမှုကို အလိုအလျှောက်ချိန်ညှိပေးပါသည်။ အဆင့်မြင့် အရောင်စီမံမှုဝိသေသသည် အရောင်နွေးမှအေးမြသည့် အရောင်အသွေးမျိုးစုံကို ပေးစွမ်းပါသည်။
အနာအဆာကင်းပြီးချောမွေ့သော ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် နှစ်မျိုးသုံး SIM နှစ်မျိုးသုံး အရန်သင့် (DSDS)
ကမ္ဘာနှင့်ချီ၍ လူကြိုက်များလှသည့် 2G/3G/4G ကွန်ရက် အပြင် M5C တွင် ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုကို ကီးတစ်ခုတည်းဖြင့် အခက်အခဲမရှိဘဲချောမွေ့စွာ ပြောင်းလဲရန် အတွက် DSDS ဝိသေအားထည့်သွင်းထားသည်။ တိကျမှန်ကန်သည့် GPS စနစ်၊ ပြင်ပကုမ္ပဏီပိုင် မြေပုံလမ်းပြသောအပ်ပလီကေးရှင်းတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသဖြင့် သင့်လမ်းကြောင်းများကို ကုံလုံစွာစီမံနိုင်စေသည်။ မရောက်ဖူးသည့်မြို့ကြီးများတွင်တစ်ကိုယ်တော်ဖြစ်စေကာမူ M5C သည် သင်သွားလိုသည့်နေရာတိုင်းကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါသည်။
M5c • အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
1. ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း မော်လ်ဒယ်များ၊ စမ်းသပ်ဒေတာ၊ လုပ်ဆောင်ချက်စွမ်းဆောင်မှုနှင့် အသေးစိတ်စံချိန်စံညွှန်းများအားလုံးသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲစာအုပ်တို့အပေါ်တွင် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။
2. သို့တည်းမဟုတ် မဖော်ပြပါက၊ ဤဝဘ်ဆိုက်၏ဒေတာအားလုံးသည် Meizu လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းမှ စမ်းသပ်ရလဒ်များကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသည့် အခြေအနေများလက်အောက်တွင် ဒေတာ အချက်အလက်များသည့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲနိုင်ပေသည်၊ သို့ပါသဖြင့် အသုံးပြုသူများသည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား လက်တွေ့ ကိုယ်ပိုင် တွေ့ကြုံခံစားရမှုအပေါ်တွင် အမှီပြုရန် လိုအပ်ပေသည်။